Nanasitrana Zazalahy Nisy Demonia i Jesosy | Fiainan’​i Jesosy
Nanasitrana Zazalahy Nisy Demonia i Jesosy
MATIO 17:14-20 MARKA 9:14-29 LIOKA 9:37-43
NILANA FINOANA MATANJAKA NY FANASITRANANA ZAZALAHY IRAY NISY DEMONIA
Nifanena tamin’ny vahoaka i Jesosy sy Petera ary Jakoba sy Jaona rehefa avy tany an-tendrombohitra. Nisy olana tamin’izay. Nitangoronan’ny mpanora-dalàna sy niadiany hevitra ny mpianatra. Faly be ny olona nahita an’i Jesosy ka nihazakazaka niarahaba azy. Hoy i Jesosy: “Inona no iadianareo hevitra amin’ireo?”—Marka 9:16.
Nandohalika teo amin’i Jesosy ny lehilahy iray anisan’ny vahoaka ary niteny hoe: “Mpampianatra ô, nentiko atỳ aminao ny zanako lahy fa misy fanahy mampahamoana ao aminy. Na aiza na aiza no ahazoan’ilay fanahy azy, dia atontany amin’ny tany izy, ka mamoaka roatram-bava sy mihidy vazana ary lany hery. Nilazako ny mpianatrao mba hamoaka azy, saingy tsy vitany.”—Marka 9:17, 18.
Toa nokianin’ny mpanora-dalàna ny mpianatra ary angamba nihomehezany, satria tsy nahavita nanasitrana an’ilay zazalahy. Tsy namaly an’ilay lehilahy efa kivy i Jesosy fa niteny tamin’ny vahoaka hoe: “Ry taranaka tsy manam-pinoana sy ratsy fanahy, mandra-pahoviana no tsy maintsy mbola hitoerako eto aminareo? Mandra-pahoviana no tsy maintsy handeferako aminareo?” Tena mihatra amin’ny mpanora-dalàna ireo teny ireo, satria nahatonga olana tamin’ny mpianatr’i Jesosy izy ireo tamin’izy tsy teo. Hoy i Jesosy tamin’ny rain’ilay zazalahy: “Ento atỳ amiko izy.”—Matio 17:17.
Rehefa nanatona an’i Jesosy ilay zazalahy dia nazeran’ilay demonia tamin’ny tany sy nataony nifanintontsintona. Nikodiadia izy sady namoaka roatram-bava. Hoy i Jesosy tamin’ilay rainy: “Hafiriana izay no nitrangan’izao taminy?” Dia hoy izy: “Hatramin’ny fahazazany. Atsipin’ilay fanahy matetika ao anaty afo sy ao anaty rano izy mba hamonoany azy.” Niangavy azy ilay lehilahy hoe: “Raha mba misy azonao atao re, dia mba iantrao izahay ka ampio e!”—Marka 9:21, 22.
Kivy be izy satria na ny mpianatr’i Jesosy aza tsy nahasitrana ny zanany. Nitalaho mafy izy ka nampahery azy i Jesosy hoe: “ ‘Raha misy azonao atao’ hoe? Tsy misy tsy vitan’ny manam-pinoana ange e!” Tonga dia niteny mafy ny rain’ilay zazalahy hoe: “Manam-pinoana aho! Ampio aho eo amin’izay mbola tsy ampy amin’ny finoako!”—Marka 9:23, 24.
Hitan’i Jesosy nihazakazaka nankeny aminy ny vahoaka ary nijery azy. Noteneniny mafy ilay demonia tamin’izay hoe: “Ry fanahy mampahamoana sy mampaharenina, mandidy anao aho: Mivoaha ao aminy ka aza miditra ao intsony.” Nivoaka ilay demonia ka niantsoantso ilay zazalahy sady nifanintontsintona be ary avy eo tsy nihetsika tamin’ny tany. Hoy ny olona maro rehefa nahita an’izany: “Maty izy!” (Marka 9:25, 26) Noraisin’i Jesosy anefa ny tanan’ilay zazalahy ary nitsangana izy ka ‘sitrana tamin’izay ora izay.’ (Matio 17:18) Tsy mahagaga raha talanjona ny olona.
Nahavita namoaka demonia ny mpianatr’i Jesosy rehefa nirahiny hitory talohan’izay. Nanontany an’i Jesosy àry izy ireo rehefa nitokana tao amin’ny trano iray hoe: “Nahoana no tsy vitanay ny namoaka an’iny?” Nasehon’i Jesosy fa tsy ampy finoana izy ireo ka hoy izy: “Tsy tafavoaka iny karazany iny raha tsy amin’ny vavaka ihany.” (Marka 9:28, 29) Nila nanana finoana matanjaka sy nampian’Andriamanitra ny olona iray vao nahavita namoaka an’ilay demonia mahery be.
Namarana ny teniny i Jesosy hoe: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa raha manam-pinoana ianareo, na bitika toy ny voan-tsinapy aza, ary hilaza amin’irỳ tendrombohitra irỳ hoe: ‘Mifindrà erỳ’, dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho vitanareo.” (Matio 17:20) Tena mahery tokoa ny finoana!
Hoatran’ny tsy ho voavaha ny olana sasany manakana ny olona tsy handroso eo amin’ny fanompoana an’i Jehovah, ka toy ny tendrombohitra tsy ho voanika na tsy ho voafindra. Afaka mandresy an’ireny olana ireny anefa isika raha miezaka hanam-pinoana.
Inona no zava-nitranga hitan’i Jesosy rehefa avy tany an-tendrombohitra izy?
Nahoana ny mpianatr’i Jesosy no tsy nahavita namoaka an’ilay demonia tamin’ilay zazalahy?
Inona no mety ho vokany raha matanjaka ny finoantsika?
Hizara Hizara Nanasitrana Zazalahy Nisy Demonia i Jesosy